24-Oct-2017 16:32:00 GMT
Zimbabwe v West Indies, 1st Test, Bulawayo, day 4
West Indies 219 (Shai Hope 90*, Powell 56, Cremer 4-64) and 373 (Chase 95, Brathwaite 86, Cremer 4-114) beat Zimbabwe 159 (Bishoo 5-79) and 316 (Taylor 73, Masakadza 57, Bishoo 4-105) by 117 runs.
Bulawayo: Legspinner Devendra Bishoo finished with nine wickets in the match as the West Indies swept to a 117-run victory over Zimbabwe in the first Test on Tuesday.
Bishoo followed up his 5 for 79 in the first innings with figures of 4 for 105 in the second as Zimbabwe were bowled out for 316 on the fourth day at Queens Sports Club.
Although Hamilton Masakadza and Brendan Taylor struck half-centuries as Zimbabwe put up a better fight with the bat in their second innings, they were derailed by some clever bowling from Bishoo and a couple of calamitous run-outs, ensuring they were always unlikely to pull off a world-record chase of 434.
The second and final Test gets underway at the same venue on Sunday.
Taylor made 73 in returns match for Zimbabwe.
Chase and Bishoo put West Indies in command
Bishoo five-wicket haul puts WI in control
Cremer, Williams wrap up Windies for 219
Windies takes on Zimbabwe in equals clash